Shina azo fehezina azo alaina tsipika vita amin'ny firavaka goavam-be vita amin'ny microfiber fotsy sy ny mpamatsy goavam-be vita amin'ny polyester Hongmeida
Fitaovana fonon-tànana polyester
logo azo alaina tsipika firavaka fonosana vita amin'ny saribakolofotsy fotsy vita amin'ny polyester
habe: S, M, L, XL
fonosana: kitapo 1 isaky ny kitapo fanoherana, ary mpivady 12 isaky ny kitapo afovoany
Fihaingo fotsy fonosana vita amin'ny polyester fotsy
Item # HMD5017 Anarana Fonja vita amin'ny lamba vita amin'ny fotsy fotsy
100% ny landihazo na ny nilona
Ny lanjan'ny lamba
70D, 100D, 150D ho an'ny nilona
Anarana marika HMD Color Fotsy sy mainty na mpanjifa
Size S, M, L, XL MOQ Tsiroaroa 1000
Package Tombo roa 2 isaky ny kitapo, tsiroaroa 600 isaky ny baoritra, habe baoritra: 55 * 50 * 45cm
GW Lanjan'ny tombony: 15-25kgs / baoritra
Ora nanomezana Manodidina ny 25-30 andro aorian'ny fitahirizana
Sample Free ohatra
Fotoana 3-5 andro aorian'ny fanamafisana ny antsipiriany
Fahaiza-manamboatra 2000 am-polony isan-kerinandro
Term Famandrihana 30% hanamafisana ny baiko amin'ny alàlan'ny T / T, ny fifandanjana tokony hatao rehefa mandefa
Application Ho an'ny mpijery, polisy, tarika mozika an-tsekoly, fanamiana, matso ary ny lanonana, mpiasa an-trano
tombony 1. vidiny avo lenta sy fifaninanana.
2. Mpiasa mahay mihoatra ny 1000 mahery mihoatra ny 20 tapitrisa mahery miaraka amin'ny teknikan'ny knitted mahay. Ny antoka sy ny fandefasana fotoana dia azo antoka.
3. Ny serivisy tsara sy ny crédit ambony.
4. serivisy OEM natolotra
Ny orinasa HMD Glove dia fanamboarana fonon-tanana vita amin'ny Cotton, fonon-tanana Nylon, fonon-tanana Fleece, Marching Band Gloves ect.
Ny orinasa dia naorina tamin'ny 2005. Mavesatra amin'ny vidiny, kalitao ary serivisy mpanjifa. Ny herinay: ny trano fonenanay any ambanivohitra, ambany ny vidin'ny mpiasa ka mifaninana ny vidinay.
Mpiasa mahay mihoatra ny 1000 no miantoka, ny kalitao sy ny fotoana fandefasana.
# Manomeza ohatra maimaimpoana
# Manolotra serivisy famolavolana / asa tanana maimaimpoana
Ny fiarovana ny vokatra # 100%
# 100% fiarovana amin'ny fandefasana entana ara-potoana
# 100% fiarovana
# Mpiasa mahay sy fanaraha-maso tsara kalitao
# MOQ kely: 500pcs hanombohana
Tongasoa mitsidika anay!
Ny ora fandefasana no andrasana
Mamerina sy azo itokisana
Misy ny modely azo alaina
Misy mihoatra ny 20 ny varotra amin'ny ekipanay, manondrana any USA, France, Spain, Australia, Japan, Germany ect., Matanjaka amin'ny serivisy mpanjifa.
Ny tombon-tsika momba ny orinasa:
1. vidiny avo lenta sy fifaninanana.
4. Orinasa orinasa: mpanjifa voalohany, kalitao voalohany
1.Q: Azontsika atao ve ny manova azy io amin'ny sary famantarana antsika manokana?
A: Eny, afaka manampy anao izahay hanampy ny logos anao amin'ny fonon-tanana.
2.Q: Iza ilay MOQ?
A: Tsy misy MOQ hangatahana, azo apetraka araka izay nangatahinao.
3.Q: Manao ahoana ny volon-tànanao?
A: Misy habe samy hafa azo. SM, MD, LG, XL
4.Q: Inona ny santionany sy fotoana fitarihana amin'ny famokarana faobe?
A: Raha ny mahazatra, fotoana tokony ho 3-4 eo ho eo andro taorian'ny nandraisanao ny antsipiriany, maimaimpoana ny santionany, mandoa vola fotsiny ianao, raha afaka mahazo ny baikonao ianao any aoriana any, ny entana mitondra no hamerenany anao.
B: Fotoam-pitarihana ho an'ny famokarana faobe dia eo amin'ny 30-35 andro aorian'ny fitahirizana.
A: Azontsika ekena amin'ny Paypal, Western Union, grama vola ary T / T. Fiomanana feno ho an'ny baiko madinidinika sy fametrahana 30% sy fifandanjana 70% rehefa fandefasana entana betsaka.
6.Q: Ahoana ny fomba fandefasana?
A: Amin'ny alàlan'ny fandefasana ranomasina raha toa ka be ny habakabaka, ary amin'ny alàlan'ny rivotra na mampiseho raha toa ny habetsaky ny filaminana kely. Etsy ankilany, manana kaonty VIP izahay ao amin'ny Fedex, DHL ary TNT, mety mahazo fihenam-bidy ambany amin'izy ireo izahay. Raha tianao ny handefasantsika entana aminao amin'ny Express, izany dia hanampy antsika hamonjy vola sy hampihena ny vidiny.
7.Q: Inona ny rafitra fanaraha-maso momba ny kalitao?
A: Amin'ny fizotran'ny baiko dia ahitantsika ny fitaovana sy ny santionany alohan'ny famokarana faobe, avy eo isika mifantina santionany isaky ny famokarana faobe, afaka mandefa santionany samihafa izahay amin'ny dingana famokarana samihafa.
Ampio: No.553 lalana Taihua, Shijiazhuang, Hebei.
Previous: Kalitao kalitao avo lenta kalitao avo lenta
Manaraka: Hanome ny OEM / ODM Shina vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika azo esorina LDPE Poly Food Polyethylene disposable PE plastika
fonon-tanana ny firavaka an'ny nylon mikrofiber
Ankizy fotsy fonon-tanana, Fotsy malemy, Fandraisana telon-tanana, Fehin-tànana kapoaka fotsy fotsy, Sarotra Cavy matevina, Cana-Cantél,